Madaxweynaha Puntland oo la kulmay Maamulka Jaamacadda Culuumta Caafimaadka ee Bosaaso – Radio Daljir
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay Maamulka Jaamacadda Culuumta Caafimaadka ee Bosaaso
Febraayo 1, 2016 8:50 b 0
Isniin, February 1, 2016_(Daljir)_Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 01-Feb-2016 kormeer booqasho ah ku tegey Jaamacadda Culuumta Caafimaadka ee magaalada Boosaaso oo ka-mid ah Jaamacadaha ugu faca weyn Puntland.
Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa waxaa Jaamacadda kusoo dhoweeyey Maamulka Sare ee Jaamacadda, Macallimiin iyo Boqollaal arday ah oo wax ka-barta Jaamacadda Culuumta Caafimaadka kulliyadeheeda kala duwan.
Madaxweynaha ayaa waxa uu soo dhoweyn kadib qol-qol u booqday qaybo kamid ah fasallada Jaamacadda iyadoo xilligaasi ay ardaydu qaadanayeen xiisadohoodi caadiga ahaa, waxaana uu wax ka-dhegeystey qaabka ay macallimiinta ardayda wax ugu sharaxayaan iyo sidoo kale qaabka ay ardaydu ugu fal-celinayaan.
Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa intaasi kadib Jaamacadda kaga qayb galay xalfad lagu soo bandhigayey wax-qabadkii Jaaamacadda iyo Tariikhdeedii oo qaab muuqaal ah loogu baahinayey Madaxweynaha iyo kasoo qayb-galayaashii xafladda.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku bogaadiyey Prof.Cabdirisaaq Xuseen Xassan ah guddoomiyaha Jaamacadda dhabar adaygga uu umuujiyey sidii uu Jaamacadda usoo gaadhsiin lahaa heerka ay maanta joogto oo ah in ay soo saarto dhakhaatiir tayo leh ooka hawla gala inta dhammaan Gobollada Puntland iyo in ay la tar-tanto Jaamacadaha Caalamka.
Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa sidoo kale ardayda uga sheekeeyey qiimaha ay leeday wax-barashadu, waxaana uu kula dar-daarmay in ay dedaalkooda sii laba jibaaraan, si ay dalkooda iyo dadkoodaba u anfacaan maadaama uu caafimaadku yahay hal-bowlaha nolosha.
Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa ugu dambayntii ardayda ku booriyey in ay ka fogaadaan qabyaaladda, Tahriibka, iyo Falalka nabad diidka isla markaasina ay xoogga saaran siday u badbaadin lahaayeen shacabkooda ku tabaalaysan gudaha dalka iyo daafaha caalamka iyagoo aqoonta ka duullaya.
DHAGAYSO:Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo wariye Koshin
DHAGAYSO:Nabadoon Xarago oo Baaqay in la Damiyo Rabshadaha Bosaaso